नेपालबाट थाइल्याण्डलाई २८२ रनको लक्ष्य, अनिल एक्लैको ९१ रन - Himalayan Kangaroo
नेपालबाट थाइल्याण्डलाई २८२ रनको लक्ष्य, अनिल एक्लैको ९१ रन
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ भाद्र २०७४, सोमबार ०५:४२ |
काठमाडौं । मलेसियामा जारी एसीसी यू–१९ एसिया कप छनोटको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्याण्डलाई २ सय ८२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । एसीसी यू–१९ एसिया कप छनोटको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्याण्डलाई निर्धारित ५० ओभरको समाप्तिमा ६ विकेट गुमाएर २ सय ८२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो ।
खेलमा नेपालका लागि अनिल कुमार शाह ९१ रनको पारी खेले । यस्तै, प्रनित थापा मगर ५० , असिफ शेख २१ रनमा पभेलियन फर्किए भने सन्दिप सुनारले ३२, कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले २२ तथा रोहितकुमार पौडेलले २ रन जोडे । उता पवन सराफ २२ तथा किशोर महतो २ रनमा अविजित रहे । बलिङ तर्फ थाइल्याण्डका लागि पैयुपुथ सङ्नार्डले सर्वाधिक ३ विकेट हात पारे ।
प्रतियोगिताकै कमजोर टिम मानिएको थाइल्याण्डविरुद्ध नेपाल सहज जीतको खोजीमा रहनेछ । पहिलो खेलमा जित निकाल्दै नेपाल एसिया कपको लागि सुखद सुरुवात गर्ने दाउमा मैदान उत्रिएको छ ।
छनोटको समूह ए मा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा सेप्टेम्बर १३ मा भुटानविरुद्ध खेल्नेछ भने समूह चरणको अन्तिम खेलमा सेप्टेम्बर १४ तारिखमा सिंगापुरविरुद्ध खेल्नेछ । समूह बी मा चीन, मलेसिया, हङकङ र म्यानमार छन । छनोटको फाइनलमा पुग्ने दुई टोली एसिया कपको लागि छनोट हुनेछ ।
Previousभारतीय संगीतकार करन जोसेफद्वारा आत्महत्या
Nextएनआरएन अष्ट्रेलियाको नेतृत्वले बाढीपिडितको लागि संकलन गर्यो, ५० दिनमा करिब ५० लाख !
मेस्सी जेल जानुपर्ने डरले जरिवाना तिर्ने तयारीमा !
१० असार २०७४, शनिबार ०२:२२
केन्याविरूद्धको खेलका लागि २४ खेलाडी घोषणा (नामावली सहित)
२७ माघ २०७३, बिहीबार ०९:४१